धरान उपमहानगरपालिकामा एमाले विजयी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
धरान उपमहानगरपालिकामा एमाले विजयी
मंगलवार, असार २७, २०७४ ११:५७ मा प्रकाशित !
इनरुवा, असार २७ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ । सोमबार राति सम्पन्न भएको मतगणनाअनुसार धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा (एमाले) विजयी भएको हो ।
यससँगै दोसो चरणको चुनावमा एमालेले सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये तीनवटामा जित हासिल गरेको छ । एमालेको तर्फबाट धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा तारा सुब्बा र उपप्रमुखमा मन्जु भण्डारी विजयी हुनुभएको हो । प्रमुखमा निर्वाचित राईले २० हजार ९७५ मत पाउनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काँग्रेसका तिलक राई १६ हजार २०२ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अइन्द्रविक्रम मेघाले ११ हजार १८० मत पाउनुभएको छ ।
त्यसैगरी, उपप्रमुखमा एमालेकी मन्जु भण्डारी सुवेदी २१ हजार २५६ मतसहित विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी काँग्रेसकी श्यामा रेग्मीले १४ हजार एकसय ९७ मत पाउनुभएको छ । धरान उपमहानगरका २० वटा वडामध्ये एमालेले १४ वटा वडा जितको छ भने पाँचवटा काँग्रेस र एकवटा माओवादी केन्द्रले जितेको छ । एमालेले वडा नम्बर ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १५, १६, १९ र २० जितेको छ । त्यस्तै, काँग्रेसले वडा नं १, २, ५, १४ र १८ जितेको छ भने माओवादी केन्द्रले वडा नम्बर १७ जितेको छ ।
धरानमा मतगणना सकिएसँगै सुनसरीमा सबै स्थानीयतहको मतगणना सकिएको छ । सुनसरी जिल्लामा रहेका सबै १२ वटा स्थानीयतहको मतगणना सकिएको मुख्य निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: तीन दिनसम्म अझै बेपत्ता जिपका चार यात्रु
NEXT POST Next post: संगीतको स नासिकेपनि सबैको मन जितेका छन् दीपेन्द्रले
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, असार २७, २०७४ ११:५७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, असार २७, २०७४ ११:५७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, असार २७, २०७४ ११:५७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, असार २७, २०७४ ११:५७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, असार २७, २०७४ ११:५७